Coral Reef: အလွမ်းရင့် ပန်းတစ်ပွင့်
အိမ့်ချမ်းမြေ့ said on December 11, 2009 at 1:16 AM
mAymAd! said on December 11, 2009 at 12:38 PM
i know the train.... life train...
ဇွန်မိုးစက် said on December 11, 2009 at 11:03 PM
မဒီ..ဟုတ်တယ်၊ ဘ၀ဆိုတာရထားတစ်စင်းလိုပါပဲ။ အဖော်ပါတဲ့ခရီးသွားနဲ့ အဖော်မပါတဲ့ခရီးသွားတော့ ကွာသွားတာပေါ့လေ။
Shinlay said on December 11, 2009 at 11:09 PM
လာထတ်သွားပါတယ်။ ဖတ်နေရင်းနဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုး
ကြောင့် တနေ့ ကိုယ်တယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့ရင်ဆိုတဲ့
အတွေးလေးဝင်လာတယ်။ ကျမလည်း နေရာဟောင်းကို
Chaw Su said on December 23, 2009 at 11:09 PM
Every time I read this ,I like it more and more .Very very touching .Thanks for sharing ,dear.I posted it in my Face book account as it is one of my favorite short stories....
ကြယ်ပြာ said on December 28, 2009 at 10:28 PM
အား .... ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ .... ပြီးသွားတာကို ဆက်ဖတ်ချင်နေသေးတယ် .... ရေးပါဦးနော် ....
may said on February 2, 2010 at 1:12 PM
I love it moe satt.
Rita said on April 25, 2010 at 6:30 PM
ထူးဆန်းလိုက်တာ အဲဒါကို ကိုယ်ဖတ်ဖူးတယ်။ ကလျာတို့ သရဖူတို့ ထဲလို့ ထင်မိတာ။
အနုပညာမြင်ကွင်း မဂ္ဂဇင်း ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ ကြောင်သွားမိတယ်။ အဲဒါ ဖတ်နေကျ မဟုတ်လို့။ ဘယ်လို အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီး ဖတ်မိတယ် မသိပေမဲ့ ဒီဝတ္ထုကိုတော့ အသေအချာမှတ်မိနေတယ်။
သေချာတောင် ပြန်ဖတ်မကြည့်ရသေးဘူး။ ခဏလေး လျှမ်းဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မှတ်မိလိုက်တာ။
ဝတ္ထုပဲ မှတ်မိနေခဲ့တာ။ ကလောင်နာမည်တောင် ကိုယ် သတိမထားမိခဲ့ဖူး ထင်တယ်။
ကိုယ်တော့ ခုထိ တခုမှ ဆုံးအောင် မရေးဖူးသေးဘူး။